सुन तोलामा आज एकैपटक रु.९०० ले घट्यो, फेरि बढ्न सक्ने अनुमान
काठमाण्डौ । यो साता लगातार दुई दिन ऐतिहासिक विन्दुमा पुगेको सुनको भाउ तेस्रो दिन मंगलबार तोलामा ९०० रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार नेपाली बजारमा मंगलबार एकैदिन तोलामा ९०० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला छापावाला सुन ७२ हजार ६०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ७२ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यो साता कारोबारको...
फेरि तोलामा रु ३०० ले बढेर सुनको भाउ रु. ७१ हजार ३०० पुग्यो
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा उच्च विन्दुमा रहेको सुनको भाउ दुई दिन स्थिर रहँदै फेरि बुधबार तोलामा ३०० रुपैयाँले बढेको छ । तोलामा ३०० रुपैयाँ बढेसँगै बुधबार छापावाला सुन तोलाको ७१ हजार ३०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन तोलाको ७१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । सुनको भाउ आइतबार तालमा एकैदिन ५०० रुपैयाँले घटेर छापावाला सुन ७१ हजार रुपैयाँ र...
सुन तोलामा रु. ५०० ले घट्यो, रु. ७१ हजार कायम
काठमाण्डौ । लगातार रेडर्क कायम गरिरहेको सुनको भाउ नेपाली बजारमा आइतबार तालमा एकैदिन ५०० रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार तोलामा ५०० रुपैयाँले घटेर छापावाला सुन ७१ हजार रुपैयाँ र तेजाबी सुन ७० हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि गत बिहीबार प्रतितोला छापावाला सुन ७१ हजार ५०० र तेजाबी सुन ७१ हजार २००...
सुनको मूल्य बढोत्तरीमा ब्रेक, तोलामा एकैपटक रु ७०० ले सस्तियो
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा लगातार दुई सातादेखि लगातार बढिरहेको सुनको मूल्यमा बुधबार एकएक ब्रेक लाग्दै एकैपटक तोलामा ७०० रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार छापावाला सुन तोलाको ७० हजार ३०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन तोलाको ७० हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । हिजो मंगलबार तालामा एकैपटक १ हजार रुपैयाँले बढेर छापावाला...
सुनको भाउ हालसम्मकै उच्च, दुई दिनमा दुई हजार बढ्यो
काठमाण्डौ। नेपालमा सुनको भाउ हालसम्मकै उच्चतम विन्दुमा पुगेको छ। प्रतितोला एक हजार रुपैयाँले बढेर नेपाली बजारमा शुक्रबार सुन प्रतितोला ६५ हजार रुपैयाँ पुगेको हो। सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार सुन प्रतितोला ६४ हजार रुपैयाँमा र बुधबार ६३ हजार रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो। शुक्रबारको मूल्य अहिलेसम्म नयाँ रेकर्ड रहेको...
एकैदिन १ हजारले बढ्यो सुनको भाउ
काठमाण्डौ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढिरहेको मूल्यको प्रभाव स्थानीय बजारमा समेत पर्दा पहेंलो धातु सुनको मूल्य आइतबार एकैदिन प्रति तोलामा १ हजार रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार तोलामा ५४ हजार ३ सयमा कारोबार भएको सुनको भाउ साताको पहिलो दिन आइतबार १ हजारले बढेर ५५ हजार ३ सय रुपैयाँ पुगेको हो...
साताभरिमा १६०० रुपैयाँले घट्यो सुनको भाउ
काठमाण्डौ । यो साताभरि सुनको भाउमा भारी गिरावट आएको छ । साताभरि सुन प्रति तोलामो १ हजार ६ रुपैयाँले घटेको हो । साताको सुरुवात आइतबार सुनको भाउ प्रतितोला ५६ हजार रुपैयाँ थियो । सोमबार यो मूल्य स्थिर रह्यो । मंगलबार तोलामा २ सय रुपैयाँ घट्दै सुन ५५ हजार ८ सयमा किनबेच भयो । बुधबार एकैदिन तोलामा ७ सय रुपैयाँले घटेर ५५ हजार १ सयमा खरीद...
सुनको भाउमा सामान्य करेक्सन, तोलाको ५६ हजार ७ सय
काठमाण्डौ । लगातार उकालो लागिरहेको सुनको भाउमा सोमबार सामान्य करेक्सन भएको छ । तोलामा ३ सय रुपैयाँले घटी सोमबार सुन ५६ हजार ७ सयमा कारोबार भएको हो । आइतबार सुनको भाउ तोलामा ५ सय रुपैयाँले बढेर २५ महिनाको रेकर्ड ब्रेक गर्दै ५७ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो भाउ, कच्चा तेलको मूल्यमा समेत भइरहेको बढोत्तरी...
सुनको भाउ २५ महिनाकै उच्च विन्दूमा, तोलाको ५७ हजार रुपैयाँ
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउले २५ महिनाको रेकर्डलाई तोड्दै आइतबार नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । २०७० साल चैतमा सुनको भाउ तोलाको ५५ हजार ८ सय थियो । त्यसपछि गत फागुन १४ गते तोलाको ५६ हजार ५ सयमा कारोबार भएर रेकर्ड कायम भएको सुनको भाउ शुक्रबार सोही विन्दूमा आइपुगेको थियो । २०७० साल चैत हुँदै २०७२ फागुन र गत शुक्रबारको रेकर्डहरुलाई समेत पछि...
एकैदिन १२ सय बढेर सुनको भाउ २ महिनाअघिकै उच्चविन्दूमा
काठमाण्डौ । एकैदिन प्रति तोला १२ सय रुपैयाँ वृद्धि भई सुनको भाउ शुक्रबार २ महिनाअघिकै उच्च विन्दूमा पुगेको छ । २०७२ फागुन १४ गते नेपाली बजारमा सुन तोलाको ५६ हजार ५ सयको दरले किनबेच भएको थियो । फागुन १८, २१, २५ र २८ गते पनि सुन यही मूल्यमा किनबेच भएको थियो । शुक्रबार पनि तोलामा १२ सय रुपैयाँले वृद्धि भई सुनको भाउ ५६ हजार ५ सय पुगेको हो...
काठमाण्डौ । पहेँलो धातु सुनको मूल्य नयाँ वर्ष २०७३ कै सबैभन्दा उच्च विन्दूमा पुगेको छ । मंगलबार सुन प्रतितोला ५५ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको हो । नयाँ वर्ष लागेपछि सुनको मूल्य यति महंगो भएको थिएन । बैशाख २ गते सुनको भाउ प्रति तोला ५४ हजार ५ सय कायम भएको थियो । त्यसपछि सुनको भाउमा सामान्य वृद्धि मात्र भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय...
याक एण्ड यतिमा ज्वेलरी एक्स्पो हुँदै, परम्परागत गहनाको फेसन सो पनि
काठमाण्डौ । सुनचाँदी व्यवसायको प्रवद्र्धन, मौलिक र परम्परागत गरगहनाको आधुनिकीकरण तथा ब्राण्डिङको उद्देश्यले आगामी जेठ ७ देखि १० सम्म काठमाण्डौको याक एण्ड यति होटलमा ‘नेपाल इन्टरनेशनल जेम एण्ड ज्वेलरी एक्स्पो’ आयोजना हुने भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघको संयुक्त...
सुनचाँदी व्यवसायका लागि कालोवर्ष-२०७२
काठमाण्डौ । महाभूकम्पले थला परेको अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधि भारतले ५ महिनासम्म लगाएको नाकाबन्दीका कारण थप थिलथिलो बन्यो । यो अवधिमा उद्योग र व्यापार क्षेत्र चौपट बन्यो । आर्थिक गतिविधि शून्यप्राय हुँदा, बजार सुस्त बन्दा र दुईछाक खानलाई नै कतिपय सर्वसाधारणलाई धौ धौं पर्दा सुनचाँदीका गरगहना खरीद गर्नेहरु समेत निरुत्साहित भए । जसका...